“ဘ၀နှစ်ခုနဲ့ ကျွန်မ” | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » “ဘ၀နှစ်ခုနဲ့ ကျွန်မ”
Posted by လုံမလေးမွန်မွန် on Nov 15, 2012 in Creative Writing, My Dear Diary, Think Different | 29 comments
ကျွန်မမှာ ဘ၀နှစ်ခုရှိပါတယ်။ ပိုပြီး တိတိကျကျပြောရရင်တော့ ဘ၀အဓိပ္ပာယ် တစ်နည်းအားဖြင့် ဘ၀ဖွင့်ဆိုချက် နှစ်ခုရှိပါတယ်။ အဲဒီအဓိပ္ပာယ်တွေနဲ့ လက်တွေ့ဘ၀တွေဟာလည်း အကျိုးအကြောင်း တစ်လှည့်စီ ဖြစ်နေပါသေးတယ်။ တစ်ခါတစ်လေမှာ လက်တွေ့ဘ၀ပေါ်မူတည်ပြီး အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်သွားတာမျိုးရှိသလို တစ်ခါတစ်လေကျတော့လည်း အဓိပ္ပာယ်ပေါ်မူတည်ပြီး လက်တွေ့ဘ၀အဖြစ် ကျင့်သုံးလိုက်ရတာမျိုးတွေ ရှိပါတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အခုချိန်အထိတော့ ကျွန်မဟာ အဲဒီဘ၀နှစ်ခုထဲမှာ မသေချာမရေရာစွာ၊ ဒွိဟများစွာနဲ့ ရှင်သန်နေရဆဲပါပဲ။
“ဘ၀ဆိုတာ လှုပ်ရှားရုန်းကန်နေရခြင်းပါပဲ” တဲ့…
ကျွန်မကိုယ်ကျွန်မ အားတင်းတဲ့ စကားတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခါတစ်လေ မိုးလင်းကမိုးချုပ် အလုပ်တွေနဲ့ တရစပ်ပြည့်နေတဲ့အခါမှာ၊ ကိုယ့်စိတ်ကို အပန်းဖြေဖို့ အချိန်နည်းနည်းလေးတောင် မပေးဖြစ်တဲ့အခါမျိုးတွေမှာ ကျွန်မကိုယ်ကျွန်မ ပြောလေ့ရှိပါတယ်။
ဒီလိုဘ၀မျိုးကို ဘယ်အချိန်ကစပြီး ကြုံရသလဲဆိုရင် ကျွန်မဆယ်တန်းဖြေပြီးတဲ့ အချိန်လောက်မှာပါ။ ဆယ်တန်းပြီးလို့ နားမယ်ကြံကာရှိသေးတယ်၊ မျက်နှာနာရမယ့်အိမ်တွေ၊ ဆွေမျိုးမကင်းတဲ့အိမ်တွေက စာသင်ပေးပါဆိုလို့ ငြင်းဆန်ဖို့ခက်စွာနဲ့ လက်ခံပြီးတဲ့အချိန်မှာ ကျွန်မရဲ့ကိုယ်ပိုင်အချိန်ဟာ ထမင်းစားချိန် နာရီဝက်နဲ့ အိပ်ချိန်ပဲ ရှိပါတော့တယ်။ နယ်မြို့သေးသေးလေးဖြစ်တဲ့အတွက် ဘာသင်တန်းမှလည်း တက်စရာမရှိ၊ ပညာရပ်ဆိုင်ရာ ဘာစာအုပ်မှလည်း မရနိုင်တဲ့အချိန်မှာ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ဖြေသိမ့်ခဲ့ပါတယ်။
“အလုပ်မရှိလို့ စိတ်တွေအားလပ်ပြီး ယောင်ဝါးဝါးဖြစ်နေမှာထက်စာရင် အလုပ်တွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့ဘ၀က တော်ပါသေးတယ်…အိမ်ကို ကူညီရာလည်းရောက်တယ်…ဘ၀ဆိုတာ လှုပ်ရှားရုန်းကန်နေရခြင်းပဲ…”
ဘွဲ့ရပြီးလို့ အလုပ်လုပ်ရတဲ့အချိန်မှာ ငွေနဲ့ပညာကို ကုတ်ကပ်ရှာရင်း ဘ၀ဆိုတာကို ထပ်မံကြုံတွေ့ရပြန်ပါတယ်။
မနက်စောစောအိပ်ယာထ၊ ထမင်းဟင်းချက်၊ (၇)နာရီမှာ ကျောင်းသွား၊ ကျောင်းဆင်း (၉)နာရီမှာ ဖယ်ရီစီးပြီး ရုံးတက်၊ ရုံးကအပြန် (၆)နာရီမှာ ဈေးဝင်ဝယ်ပြီး အိမ်ပေါ်တက်၊ (၇)နာရီမှာ စာသွားသင်၊ (၉)နာရီ စာသင်ပြန်လာရင် အ၀တ်လျှော်၊ အိမ်မှုကိစ္စလုပ်၊ နောက်တစ်နေ့အတွက် ပြင်ဆင်နဲ့ အားလုံးပြီးလို့ နားမယ့်အချိန်မှာ (၁၁)နာရီလောက် ဖြစ်နေပါပြီ။ စာဆက်ကြည့်လိုက်ပြီဆိုရင်တော့ ကျွန်မရဲ့အိပ်ချိန်ဟာ ည(၁၂)နာရီလောက်ကို ရောက်သွားပါတော့တယ်။
အဲဒီလိုနေ့ရက်တွေကို ပုံမှန်ဖြတ်သန်းလာရတဲ့အချိန်မှာ တစ်ခါတစ်လေတော့လည်း ပင်ပန်းမိပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုကိုယ်လမ်းပျောက်နေသလို ခံစားရတာမျိုး၊ နေထွက်နေ၀င် မမြင်ရတဲ့ဘ၀ကို မွန်းကျပ်သလို ခံစားရတာမျိုးတွေ ဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။ ဒီလိုအချိန်မျိုးတွေမှာလည်း ဒီစာသားလေးနဲ့ပဲ ကိုယ့်ကိုကိုယ် အားပေးဖြစ်ပါတယ်။
“ငါ့အတွက် ဖြစ်လာတဲ့ ဘ၀မှာ ငါ့ရဲ့ရွေးချယ်မှုတွေကို ပြီးဆုံးအောင် ဆက်လုပ်ရမယ်…ဘ၀ဆိုတာ လှုပ်ရှားရုန်းကန်နေရခြင်းပဲ…”
တစ်ခါတစ်လေကျတော့လည်း အတွေးတွေက တစ်မျိုးဝင်မိပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ လူ့ဘ၀ဆိုတာ ရခဲလှပါတယ်။ ရခဲလှတဲ့ လူ့ဘ၀ဟာလည်း ဘယ်အချိန်သေဆုံးမယ်ဆိုတာ မသိရလောက်အောင် တိုတောင်းလွန်းလှပါတယ်။ ဒီလိုရခဲလှပြီး တိုတောင်းလှတဲ့ လူ့ဘ၀ခဏလေးမှာ ကိုယ်ဝါသနာပါရာလေးတွေလုပ်ရင်း၊ မိသားစုအတွက်၊ ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်၊ အများအကျိုးအတွက် တတ်နိုင်သလောက် လုပ်ကိုင်ပေးရင်း၊ ဘာသာတရားအဆုံးအမအောက်မှာ နေထိုင်ရင်း အေးချမ်းတည်ငြိမ်စွာ ဖြတ်သန်းသွားချင်ပါတယ်။ လောဘတွေ၊ တပ်မက်မှုတွေ နည်းနိုင်သမျှနည်းရင်းနဲ့ပေါ့။
အားလပ်ချိန်တွေများနေတဲ့အခါမျိုးတွေမှာ အဲဒီလိုအတွေးတွေက ကျွန်မခေါင်းထဲကို ၀င်လာတတ်ပါတယ်။ ကျွန်မတက်နေတဲ့ကျောင်းရဲ့ ကျောင်းပိတ်ရက်အချိန်တွေမှာ၊ စာသင်တဲ့ကျောင်းသားရဲ့ ကျောင်းပိတ်ရက် စာသင်နားချိန်တွေမှာ၊ ရုံးမှာ အလုပ်ပါးလို့ အနားရနေတဲ့အချိန်တွေမှာ ကျွန်မဆီမှာ အတွေးပေါင်းစုံရှိနေတတ်ပါတယ်။ နယ်က အမေနဲ့မောင်လေးကို လွမ်းနေတတ်တာ၊ ဆုံးသွားတဲ့ အဖေနဲ့အဘွားကို သတိရပြီး ၀မ်းနည်းနေတတ်တာ၊ တစ်ယောက်တည်းယောင်တောင်တောင်နဲ့ အထီးကျန်သလို ခံစားနေတတ်တာ…အစုံပါပဲ။ အလုပ်နဲ့ပြည့်နေတဲ့ဘ၀မှာ အသားကျနေရင်းက အချိန်ပိုတွေထွက်လာပြီဆိုတော့ မနေတတ်မထိုင်တတ်နဲ့ အဓိပ္ပာယ်မရှိသလို ခံစားလာရပါတယ်။
အဲဒီလိုဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့ စိတ်သက်သာရာရဖို့အရေး ကျွန်မရဲ့ခံယူချက်ကို ပြောင်းလဲလိုက်ရပါတယ်။
“ဘ၀ဆိုတာ တည်ငြိမ်အေးချမ်းစွာ ဖြတ်သန်းခြင်းပဲ…”
နောက်တော့ ကျွန်မရဲ့အားလပ်ချိန်တွေကို အကျိုးရှိစွာ အသုံးချမိပါတယ်။ ကျောင်းသွားမယ့်အချိန်မှာ ဈေးဆင်းဝယ်၊ လမ်းလျှောက်၊ ဘုရားကြာကြာရှိခိုးပြီး အစားထိုးလိုက်ပါတယ်။ စာသင်မယ့်အချိန်တွေကို စာအုပ်ဆိုင်သွား၊ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့မုန့်စား၊ စာအုပ်တွေဖတ်၊ အတွေးတွေကိုချရေး စတာတွေနဲ့ ကုန်ဆုံးစေပါတယ်။ ဦးနှောက်ထဲမှာ အတန်ကြာမေ့နေတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကို မွေးနေ့တွေကို ပြန်အမှတ်ရပြီး မွေးနေ့ဆုတောင်းတွေကို သတိတရပို့ဖြစ်ပါတယ်။ အမေနဲ့ဖုန်းပြောချိန်တွေပိုထွက်လာပြီး အမေ့ကို ပိုဂရုစိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလိုရက်တွေကို အေးချမ်းစွာဖြတ်သန်းနေရတာကိုလည်း သဘောကျမိပါတယ်။
စိတ်ဆိုတာမျိုးက အင်မတန်ပြောင်းလဲမြန်ပါတယ်။ တစ်ခါတစ်လေ ရောက်နေရတဲ့ဘ၀ကို ငြီးငွေ့မိတတ်ပါတယ်။ လှုပ်ရှားရုန်းကန်နေရပြီး ငွေနောက်ကို အသည်းအသန်လိုက်နေရတဲ့အချိန်မှာ နယ်မြို့လေးမှာ မိသားစုနဲ့အတူနေပြီး ရောင့်ရဲစွာနဲ့ အေးချမ်းတည်ငြိမ်တဲ့ ဘ၀ကို ဖြတ်သန်းချင်မိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အမေက နယ်မှာပဲ အခြေချပြီး နေမလားလို့ မေးလာပြန်ရင်လည်း ကြိုးစားရင်ကြိုးစားသလောက် ပညာနဲ့ငွေရှာနိုင်တဲ့ မြို့ပြကဘ၀ကို မစွန့်လွှတ်နိုင်ဘူး ဖြစ်နေပြန်ပါတယ်။
ကံမကောင်းဘူးလို့ပဲ ဆိုရမလား၊ ကျွန်မကိုယ်တိုင်ကပဲ စီမံခန့်ခွဲမှုညံ့တာလား မသိတော့ပါဘူး။ အဲ့ဒီဘ၀နှစ်ခုကို အညီအမျှတစ်ထပ်တည်းကျအောင် ဖြတ်သန်းဖို့ အခုထက်ထိ မစွမ်းဆောင်နိုင်သေးပါဘူး။ တစ်ထပ်တည်းကျခဲ့ရင်တောင် ခဏပါပဲ။ နောက်ဆုံးတော့ လှုပ်ရှားရုန်းကန်ခြင်း နဲ့ တည်ငြိမ်အေးချမ်းစွာဖြတ်သန်းခြင်း ဆိုတဲ့ ဘ၀နှစ်ခုမှာ တစ်လှည့်စီနေထိုင်ရင်း ရှင်သန်နေမိပါတော့တယ်။
ဘဝကိုတော့ဒီလိုပဲ နားတစ်လှည့်၊ သွားတစ်လှည့်၊ လှုပ်တလှည့်၊ ငြိမ်တလှည့်သွားရတာပါပဲ။
ညီမ စာတွေဖတ်ရသလောက်တော့ စိတ်ဓာတ်တည်ငြိမ်ပြီး ရင့်ကျက်တဲ့ ညီမလေးတစ်ယောက်ဖြစ်မယ်လို့တော့ မှန်းဆမိရဲ့
အားပေးတဲ့အတွက်ရော..ပထမဆုံးကွန်မန့်အတွက်ရော ကျေးဇူးပါနော် အစ်မ…
တကယ်တော့ မွန်မွန်က အပြင်မှာ ပေါတောတောရယ်…
လုံမရေ… ဖတ်တာအရင်ဆုံးဖတ်ဖြစ်ပေမယ့် မန့်တာ နောက်ကျတဲ့အတွက် ခွင့်လွှတ်စေချင်တီ…
ပြီးတော့ နင် ကိုယ့်ကိုကိုယ် ပေါတောတောမှန်း သိတဲ့အတွက် ၀မ်းသားပါတီ…အဟီး
ငါ့ကိုယ်ငါ ပေါတယ်လို့ ၀န်ခံပြီးသားပဲ… (အဟဲ..rap ရွတ်သလို ဖတ်နော်..)
ငါ့လက်ရေးနဲ့ စာရွက်ကြီးကို ဖတ်ပြီး ကောင်းတယ်လို့ ပြောလိုက်တဲ့အတွက် မန့်တာနောက်ကျတာကို ခွင့်လွှတ်ပါကြောင်း…
အင်းလေ. ဘကုံး နဲ့ ဝလုံး ဆိုပီး ၂ခုရှိတာ မလား. သိသားပဲကွယ်.
အားပေးခဲ့တယ်ပါဗျာ တော်ရာမှာမနေရ ပျော်ရာမှာ မနေရတဲ့ဘ၀တွေဘဲလေ
အစ်မဆိုရင် မွန်မွန်ပြောတဲ့ဘ၀နှစ်ခုအပြင် သံသရာမှာကျင်လည်ရဦးမယ့်ဘ၀တွေအတွက်ပါ
ဒီတော့ လှုပ်ရှားရုန်းကန်ရတဲ့ဘ၀နဲ့တည်ငြိမ်အေးချမ်းတဲ့ဘ၀နှစ်ခုလုံးကို တလှည့်စီဖြတ်သန်းရင်း
ကုသိုလ်တွေအများကြီးမပြုနိုင်ရင်တောင် အကုသိုလ်ကိုကင်းနိုင်သမျှကင်းအောင် သတိထားနေထိုင်သွားရင်း ဘ၀နှစ်ခုလုံးကိုကျေနပ်နှစ်သိမ့်နိုင်ပါတယ်။
မည်သူ့အတွက်မှအကျိုးမရှိသည့် သိမ်ဖျင်းသောစကား(အတင်းစကားများ)ကိုမပြောဆိုမိအောင်နေ ထိုင်ခြင်း၊(ထိုသို့အတင်းစကားပြောဆိုခြင်းဟာ မုသာဝါဒကံမြောက်ပါတယ်တဲ့ကွယ်)။
စတဲ့စတဲ့ ကိုယ်ရှောင်ရှားနိုင်သမျှအဆိုးလေးတွေကို ကျင့်ယူရှောင်ရှားတတ်လာအောင်နေထိုင်သင့်ပါတယ်။
ကြားဖူးတဲ့ ဟာသတစ်ပုဒ်ကို သွားသတိရမိတယ်။
စကားကို အမျိုးမျိုး မပြောတတ်ဘူး။
ခုတမျိုး တော်ကြာတမျိုး ၂မျိုးပဲ ပြောတတ်တယ်တဲ့။
ကျုပ်အထင်ပေါ့ လူတိုင်းဟာ မိခင်ဝမ်းကထွက်လာပြီး သေတဲ့အထိ ဘဝများစွာကို လောကဇါတ်ခုံပေါ်မှာ လှလှပပဖြစ်အောင် ကြိုးစားပြီး သရုပ်ဆောင်နေကြရတာကလား
၁နှစ်သား…. ချာတိတ်… ကျောင်းနေအရွယ် ၊ အပျိုပေါက် ၊ လူပျိုပေါက် ၊ အိမ်ထောင်ရှင် ၊ လုပ်ငန်းရှင် ၊ အလုပ်သမား ၊ ကျောင်းဆရာ ၊ ဘုန်းကြီး လူကြီး အဖိုးကြီး အဖွားကြီး …အို စုံနေတာပါပဲ
မွန်ရေ…အရေးအသားတွေက ရင့်ကျက်လို့ ညီမလေးပေမယ့် လေးစားအားကျမိပါတယ်..
ခုချိန်ထိတော့ ဘ၀ဆိုတာ လှုပ်ရှားရုန်းကန်ခြင်းရယ်လို့ မသိသေးပါဘူး….
ကလေးတစ်ယောက်လို အပူအပင်ကင်းမဲ့စွာ ဖြတ်သန်းနေရတုန်းပါပဲ….
ဟုတ်ပါတယ်ရှင်…တော်ရာမှာ ဘယ်တော့မှ ပျော်ရမလဲမသိဘူး..အားပေးတာ ကျေးဇူးပါရှင်…
ဘယ်ဘ၀မှာပဲနေနေ အကုသိုလ်ကင်းဖို့ ကြိုးစားရမယ်ဆိုတဲ့ အစ်မရဲ့ စကားလေးကို မှတ်သားလိုက်ပါတယ်နော်… ကျေးဇူးပါရှင့်…
ဟုတ်ပါ့… ငယ်ငယ်က “ခုတစ်မျိုး တော်ကြာတစ်မျိုး..သုံးရက်မှာရေတစ်ခါချိုး.. —– ညစ်ပတ်အိုး” ဆိုပြီး စကြတာကို သွားသတိရတယ်….
မွေးစကနေ သေသည်အထိ ဘ၀ပေါင်းများစွာကို ကြုံတွေ့ရတာပေါ့နော်… ကပေရော..အခု ဘယ်ဘ၀မှာလဲ… အိမ်ထောင်ရှင် လုပ်ငန်းရှင် ဘ၀လား..
အပူအပင်ကင်းတဲ့ဘ၀ကို ပိုင်ဆိုင်ထားတယ်ဆိုလို့ ၀မ်းသာမိပါတယ် အစ်မရေ… အားလည်း ကျမိပါတယ်…
အထင်တော့မကြီးပါနဲ့နော်အစ်မ..တော်ကြာ အပြင်မှာတွေ့မှ မွန်မွန်ပေါတာ သိလိမ့်မယ်…
ခင်ခတို့ ငယ်ငယ်တုန်းက ခေတ်စားခဲ့တာ အသံကိုဘဲနားထောင်ရတဲ့ ရေဒီယိုပေါ့။
ခင်ခတို့ အရွယ်လေးရောက်လာတော့ ခေတ်စားလာတာ အသံအပြင်ရုပ်ပါမြင်ရတဲ့ ရုပ်မြင်သံကြားတီဗွီ။
ခင်ခတို့ အခုအသက်အရွယ်ကြီးတော့ ခေတ်စားလာနေတာ အသံနဲ့ရုပ်မြင်ရတာကိုဘဲ ပိုပြီးဆန်းကျယ် သတဲ့ 3D ဆိုလားဘဲ။
လုံမလေးမွန်မွန်ရေ အခုသမီးတို့အရွယ် ဘ၀နှစ်ခုနဲ့ကျွန်မ ဆိုရင် နောက်အရွယ်များဆိုရင် နောင်ဘ၀ အတွက်ပါစဉ်းစားပြုနေရပြီမို့ ဘ၀သုံးခုနဲ့ကျွန်မ ဖြစ်မလားဘဲနော်။
ဟုတ်တယ်။ အရမ်းတိုက်ဆိုင်နေတဲ့ ခံစားချက်ပါပဲ။ လုံမလေးမွန်မွန်ရဲ့ ဘ၀ဖြတ်သန်းမှုလေးက ကျွန်မနဲ့ တော်တော်လေးဆင်တယ်။ ငါသင်ထားတဲ့ပညာတွေနဲ့ ငါရည်မှန်းချက်တွေ ကို အကောင်အထည်ဖော်ချင်တယ်ဆိုပြီး ရည်မှန်းချက်နောက်လိုက်ရင်းနဲ့ပဲ …………………………… ဘ၀ရပ်တည်မှုပုံစံတွေက ကာရန်မညီတော့တာပဲ။ ဒါပေမယ့်တော့ ကြိုးစားဆဲပါပဲ။ မညီတာတွေကို ညီအောင်ပြန်ညှိရင်း နားထောင်ကောင်းတဲ့သံစဉ်လေးတော့ သီကြူးမိအောင်ပေါ့။
နေဝင်ညကို ကူးဖြတ်ပြီးမှ ရောင်ခြည်သာတဲ့ နေ့သစ်ကိုရောက်မယ်။
ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကြိုးစားထားမှ တချိန်မှာ အောင်မြင်လွတ်မြောက်နိုင်မယ်လေ။ ..အရှံးမပေးနဲ့မိငယ်ရေ..
ခွန်အားဖြည့်မိငယ် တဲ့။ ခင်မောင်တိုး ရဲ့သီချင်းလေး။
အရှုံးမပေးဘဲ ခွန်အားဖြည့်ထား လုံမရေ။
ပျော်ရာမှာ မနေရ .. တော်ရာမှာ နေရ ဆိုသလိုပေါ့ ..
ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုလောက် ကျော်ဖြတ်ပြီးရင် နေသားတကျဖြစ်သွားမှာပါ ..
Aja aja … fighting ..
နောက်ပြီး မိမိကိုယ်မိမိ ယုံကြည်ချက်တွေအပြည့်နဲ့ပေါ့။
နောက်လူလတ်ပိုင်းအရွယ်ရောက်တော့ ဖြစ်ချင်တာနဲ့ဖြစ်ခဲတာအကြား လွဲမှားလွဲချော်မူ့တွေနဲ့
ကြုံရတဲ့အခါ ဘ၀ကို မချင့်မရဲတွေ နာကြည်းမူ့တွေနဲ့ တက်တခေါက်ခေါက်ပေါ့။
အနယ်ကျသွားတဲ့အရွယ်မှာတော့ ကိုယ်ရလာတဲ့ အနေအထားကို ဘယ်လိုကောင်းအောင်ပြုပြင်ပြီး
ရလာဒ်ကောင်းရအောင် လုပ်မယ်ဆိုတာကိုဘဲ တွေးမိပါတော့တယ်.။
ဖြစ်ခြင်း ပျက်ခြင် ရုန်းကန်လှုပ်ရှားခြင်းတွေမရှိတဲ့ နိဗ္ဗာန်ကို မြန်မြန်ရောက်အောင် ကြိုးစားအားထုတ်ပါကွယ်
ဒါဆို ဘယ်ဘ၀မှ မရှိလာတော့ မပင်ပန်းရတော့ဘူးပေါ့နော်..
အူးဗိုက်ဆို အကြွေးတွေများလို့န်ိဗ္ဗာန် မြန်မြန်ရောက်ချင်နေပြီ
ဘီအီးမ၀သေးလို့မသွားသေးတာ..
ခေါင်းစားသွားတာလားဟင်… ဘယ်လိုများ တွေးမိလိုက်လဲ… အားပေးသွားတာ ကျေးဇူးပါရှင့်…
ဖြစ်လောက်တယ် လေးလေးရေ… အသက်ကြီးလာရင် ဘယ်နှစ်ဘ၀ ကြုံရဦးမလဲ မသိဘူး..လေးလေးရော..ဘယ်လိုဘ၀တွေ တွေ့ဖူးလဲဟင်…
မညီတာတွေကို ညီအောင်ပြန်ညှိရင်း နားထောင်ကောင်းတဲ့သံစဉ်လေးတော့ သီကြူးမိအောင်ပေါ့။
အားပေးစကားကြောင့် အားရှိပါတယ် အရီးရေ… နောက်လည်း အားပေးပါဦးနော်…
တစ်ခါတစ်လေ စိတ်ဓာတ်တွေ အောက်ဆုံးရောက်နေတတ်လို့ပါ….
ဆယ်စုနှစ်ရဲ့ သုံးပုံတစ်ပုံကိုတော့ ဖြတ်ကျော်ထားပါကြောင်း… Aja Aja Fighting!!!
ရုန်းကန်မှုတွေရော..နာကျည်းမှုတွေရော.. လွဲချော်မှုတွေရော… အားလုံးကိုတော့ မဖြစ်မနေကျော်ဖြတ်ရမှာပေါ့နော်…ဒါတွေကျော်ပြီးလို့ လေးပေါက်တုိ့အရွယ်ရောက်လာရင်တော့ အဲ့ဒီလိုပဲ အနည်ကျသွားမယ်လို့ ထင်ပါရဲ့….
နင်မသွားခင် ငါ့အကြွေးတွေ အပြီးဆပ်သွားနော်…
လုံမလေးရဲ့ ဘ၀ ၂ ခုကို အညီအမျှတစ်ထပ်တည်းကျအောင်
မွန်မွန်ရေ တည်ငြိမ်အေးချမ်းတဲ့ ဘ၀ ဆိုတာ လူအများစုမျော်လင့် ကျတဲ့ တခုပေါ့။
ကို့နိုင်ငံ ကို့လူမျိုးအတွက် အကျိုးရှိစေရမယ်ဆိုတဲ့ အကျီးအကျယ်ကိတ်စတွေမပြောခင် ကို့မိသားစုအတွက် အနဲဆုံးကို့အတွက် ရုန်းကန်လှုပ်ရှားရဖို့ တာဝန်ရှိတဲ့ သတ္တ၀ါဆိုတော့ တတ်နိုင်သလောက်ကြိုးစားပီး
ရှေ့ဆက်ခြင်းဖြင့် အဓိပ္ပါယ်ရှိသော ဘ၀တခုပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေဂျောင်း
တစ်ခုက နေ့စဉ်အလုပ်လုပ်နေတဲ့ဘ၀… ငွေရှာနေတဲ့ဘ၀…
နောက်တစ်ခုက ပိုက်ဆံရခြင်းမရခြင်းထက်… ကိုယ်လုပ်ချင်တာကိုယ်လုပ်နေတဲ့ဘ၀…
ပြန်စဉ်းစားကြည့်ရင် ငွေရှာရတဲ့ဘ၀က ပိုပင်ပန်းတယ်…
ကျွန်တော့ဆရာတစ်ယောက်ကပြောဖူးတယ်… ဘ၀ဆိုတာရုန်းကန်ရတယ်… ပင်ပန်းတယ်လို့ထင်ရင်…
အဲဒီလိုပဲ… ပင်ပန်းမှအလုပ်လို့ထင်ရင်လဲ တစ်သက်လုံးပင်ပန်းတဲ့အလုပ်ပဲလုပ်ရမှာပဲတဲ့…
အဲဒီကတည်းက ကျွန်တော်ဘ၀ကို ပြုပြင်လိုက်တယ်….
ရုန်းကန်တယ်ဆိုတာထက်… တည်ဆောက်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ ဘ၀ကိုလျှောက်လှမ်းပါတယ်….
“နေထွက်နေ၀င် မမြင်ရတဲ့ဘ၀ကို မွန်းကျပ်သလို ခံစားရတာမျိုးတွေ ဖြစ်လာတတ်ပါတယ်”
အောင်မြင်လှပတဲ့ ဘ၀လေးဟာ ညီမလေးအတွက်ဖြစ်နေမှာပါကွယ်
ကျောင်းတုန်းက ဆိုခဲ့ဖူးတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်..မိမိကိုယ်ကိုကောင်းအောင် ကြိုးစားပြီးမှ မိမိကျောင်း၊ မိမိတိုင်းပြည်ဆိုတာ လာသလိုပေါ့…
ဆိုတော့..ရုန်းကန်လှုပ်ရှားပြီး ကြိုးစားခြင်းပြီးမှသာ တည်ငြိမ်အေးချမ်းတဲ့ဘ၀ကို ရောက်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့ အစ်မစကားလေးကို မှတ်သွားပါတယ်နော်…
ဒီဘ၀လား ပရမ်းပတာ ဖြစ်တာ…
အဲ့သက်သာမယ့် အလုပ်လေးတွေကို ပြန်ရှယ်ပါဦးလား…
ခုန်ထပြီး မဖြုံမှ အကုန်ရမယ့်ပေါ့.. ယုံပါ၏…
အားပေးတဲ့အတွက်ရော..ဆန္ဒပြုပေးတဲ့အတွက်ရော ၀မ်းသာပါတယ် အစ်မရေ…
အမွန်ရေ ဖတ်ရင်းနဲ့အမွန်ကို လေးစားလာတယ် တော်လိုက်တာကွယ် နေထွက်နေ၀င်ကြိုးစားလိုက်ပုံများ။
ဟောဒီကရွှေကြည်ကလေ အမေ့ဒုက္ခအိုးလေးပါ အပျင်းလေးလေ အခုတော့အဝေးတနေရာမှာအချိန်ဇယားတွေကြားမှာ လှုပ်ရှားနေရပြီ..။
ဒါပေမယ့်လည်းပေါ့ ငွေကအရာရာကိုမဖန်ဆင်းနိုင်ပေမယ့် အရာရာနီးပါအတွက်ကငွေကလိုအပ်နေတော့လည်း…။
မွန်မွန်ရေ ကျမဆို ခုထိ မိဘအရ်ိပ်နဲ့ ကင်းနိုင်သူမဟုတ်သေးဘူး။ မွန်မွန်လို ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုး ကိုယ့်ခြေထောက်ပေါ် ကိုယ်ရပ်နိုင်တဲ့ သူတွေကို အားကျပါတယ်။
္ပ္ပဤခရီး နီးချင်နီး ဝေးချင်ဝေး ဆက်လျှောက်ကြတာပေါ့လေ နော်
ပိုစ့်ပိုင်ရှင် ရေ……………….. comment အကြွေး မှတ်ထားလိုက် ဗျာ ….
အစ်မရေ..တကယ်တော့ မဟာရာဇာရဲ့ တစ်ခါတစ်ရံ ရယ် ၊ အစ်မရဲ့ ဆက်ရန်ရှိသေးသည် ရယ်ကို ဖတ်ပြီးတော့မှ ခေါင်းထဲကအတွေးတွေကို စာတွေအဖြစ် ပြောင်းလဲနိုင်ခဲ့တာပါ…
အမွန်တို့ရဲ့ ဒုတိယအရွယ်မှာ ဒုတိယဘုရားသခင်အတွက် အားတင်းထားပါနော်…
အစ်မရေ..တစ်ခါတစ်လေတော့လည်း မိဘအရိပ်မှာ အပူအပင်းကင်းကင်းနဲ့ အေးချမ်းစွာနေရတဲ့ဘ၀ကို အားကျမိပါတယ်လို့…